Shahiid sarreeye Serdar Genc Xadgudubka dhamaadka taariikhda waa la beddelay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirSarkaal Xoogan ee Serdar Genç ayaa ku dhacay taariikhda la filayay
13 / 06 / 2017 35 Izmir, Tareenka Tareenka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Serdar Young Guud ayaa isbeddelay taariikhdiisa ugu dambeysa: Dusha sare ee muwaadinimadu u maleyneyso inuusan weligiis dhamaan. Taliyaha Sare ee Serdar Young Overpass, oo dhismihiisu ahaa bilihii 6, ayaa dib loo dhigay masuuliyiinta. 20 Mashruuca mashruuca, oo loo baahan yahay in la buuxiyo 2017, wuxuu sii wadi doonaa bilaha 2
Si loo xiro gaadiidka lugta ah ee Degmada Cumhuriyet iyo Ertugrul Xaafad, 22 Diseembar 2016, dhismaha mashruuca Sirdheg ah ee Serdar Genç ayaa ka bilowday. Tan iyo bilawgii mashruuca, shaqooyinka ku saabsan qadka sare ee la filayo ayaa dib loo dhigay. 2 Million 788 kun 407 Pound maal gashiga Taariikhda Dhammaadka Taariikhda 20 May 2017, inkasta oo dadweynaha degmada lagu dhawaaqay, shaqadu weli ma dhamaan. Dhismaha buundada u dhaxeysa jaranjarooyinka wiishka iyo wiishka ayaa sidoo kale arkay in wiishka aan la dhigin, mashruuca ayaa bedelay taariikhda dhammaadka.
LAGU XUSUUSO KALA DUWAN
Haddii qorshaha la qorsheeyay la raaco, mashruuca si aad ah loo filayo waa in la furo maalinta ka hor 23. Qeybta kor-u-dhaafka ah, oo aan shaqadooda la dhammayn karin, ayaa dib loo dhigay. Mas'uuliyiinta, oo aan wax hadal ah ka bixin mawduuca, waxay bedeleen taariikhda dhammaystirka shaqada ee ku yaala warqada ku xigta dhismaha. Sida laga soo xigtey taariikhda la cusbooneysiiyay, waxaa la furayaa Serdar Young Flyover oo lagu magacaabo 17.08.2017. 6-dhaafka dheer ee dheeriga ah wuxuu sii wadi doonaa in uu sii xumeeyo muwaadinka.
1 AAN AAN HELIN
IZBAN khadka xaafaddan, ka dibna xaafadda xaafadda oo isku xirta xaafadda Jamhuuriyaanka Jamhuuriga ah ee ka tallaabsatay 3 meel u dhow waqti hore ayaa la xidhay. Si kastaba ha noqotee, dadka lugaynaya iyo gaadiidka baabuurta u dhaxeeya labada xaafadood ayaa la jabiyay. 3 Dadka Torbalı waxay sugayeen mashruuc loogu talagalay ugu yaraan dadka lugaynaya sanado badan inay sharxaan hay'adaha. Ma jiraan wax 1 ku filan oo ku saabsan lineka IZBAN oo kala qaybiya Torbalı laba. Dadka degaanka ayaa rajeynaya furitaanka mashruuca aan dhamaadka lahayn.
DADKA QOYSKA WAXAY WAX KA BEDI KARAA BADAN BISHII BISHA
Dadweynaha degmada oo muujiyay ra'yigooda mawduuca waxay doonayaan in ay furaan boodhka isla marka ay dhammaato taariikhda dhammaadka. Dadka degan gobolka oo cambaareeyay mashruuca dhismaha "Ma garanayno sababta mashruucan uusan u dhamaan. Waxaa jiri kara dib-u-dhac, laakiin masuuliyiinta waa inay raacaan waqtigooda. Waxaa jiray cabasho muddo dheer ah, hadda mashruuca ayaa dib loo dhigay ilaa bilawgii bilood ee dambe. Inkastoo aan rabno inay joojiso sida ugu dhakhsaha badan, dhammaadka mashruuca ayaa dib loo dhigayaa ".
Waxaa laga soo xigtey: Yasin TEKİN - torbaliege.net
Jirka ugu weyn ee 'New Çetin Emeç overpass'
Shaqada hoowlaha hoose ee Mevlana ayaa bilaabmay
Mashruuc cusub oo Istanbul ka socda Serdar İnan (Fiidiyow la Dur
IZBAN khadka tooska ah
Taliyaha Sare ee Serdar Genç
Gunfight ee saldhigga tareenka ee Jarmalka